FANAPAHANA NY MBS (ZANABOLANA): Didim-pitsarana fa tsy fepetra ara-panjakana – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 11:41
Antananarivo, MGA -11	℃
Voaporofo ny fihoaram-pefin'ny MBS (sary nindramina)
Accueil/Politika/FANAPAHANA NY MBS (ZANABOLANA): Didim-pitsarana fa tsy fepetra ara-panjakana
FANAPAHANA NY MBS (ZANABOLANA): Didim-pitsarana fa tsy fepetra ara-panjakana
Didy hitsivolana no navoakan’ny Fitsarana tamin’ilay raharaha fanapahana ny MBS tao amin’ny fampitana amin’ny alalan’ny zanabolana, nahitana ny Startimes, Canal Plus, Parabole. Taorian’ny fitoriana nataon’ny Fanjakana teo anivon’ny “DLC» eo anivon’ny Primatiora, dia nisy ny fangatahana nataon’ity rafitra ity teo anivon’ny tribonaly. Ity farany indray no nandinika ka nandray ny didy hitsivolana izay milaza ny tokony hanapahana ny fampitana tamin’ny alalan’ny zanabolana, izay tsy misy hidiran’ny Minisitry ny Serasera sy ny Minisitry ny Fitsarana velively.
Lucien R. 13 février 2021
Na ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina na ny Minisiteran’ny Fitsarana dia samy tsy afaka mandray didy hitsivolana. Diso tanteraka, noho izany, ny filazana fa ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo no tao ambadiky ny fahatapahan’ny ny MBS tamin’ny zanabolana. Nanazava ny Mpitondra tenin’ny Governemanta, Lalatiana Andriatongarivo, omaly, fa ny “Direction de la legislation et du contentieux” teo anivon’ny Primatiora no manao ny fangatahana eo anatrehan’ny tribonaly rehefa nitory ny Fanjakana.
Lazaina fa manohitohina ny fahalalahana maneho hevitra ny didy nivoaka, hoy ny Minisitra. Fotoana izay nampahatsiahivany izay voalaza ao amin’ny andininy faha-10 ao amin’ny Lalàmpanorenana, manao hoe ny fahalalahana hanan-kevitra, haneho hevitra, ny fahalalahana hiserasera, ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, ny fahalalahana hivondrona, ny fahalalahana manao fivoriana, ny fahalalahana hivezivezy, ny fahalalahana hisaina, ny fahalalahana hanana ny finoana dia hiantohana ho an’ny rehetra, saingy, feran’ny fahalalahana sy ny zon’ny hafa, ny fanajana ny fiarovana ny filaminam-bahoaka, ary ny fanajana ny fahamendrehan’ny firenena, ary ny fanajana ny fiarovana ny firenena.
Nihoa-pefy ny MBS
Araka izany, filazan’ny onjampeo iray miteny manao hoe vola avy any amin’ny vondrona mpampihorohoro no hamatsiana ny fandaharanasa PEM na ny « Plan Emergence de Madagascar », ary manao fifampiraharahana amin’ny mpampihorohoro izao Fitondram-panjakana izao, amin’ny fakana vola 8 miliara dolara, dia fanohitohinana ilay fahamendrehana sy fiandrianam-pirenena mihitsy, hoy ny nambarany. Tsy azo ekena izany, hoy izy, satria tsy vitan’ny tsy fanajana ny fiandrianam-pirenena fotsiny ihany, izay raran’ny Lalàmpanorenana, fa mampirisika ireo firenena vahiny, indrindra ireo tandrefana, izay tsy mankasitraka ny mpampihorohoro, hanafika ny Fanjakana malagasy noho ny filazana fa misy ny fifampiraharahana amin’ny vondrona mpampihorohoro.
Betsaka ihany koa ny fandranitana adim-poko eo amin’ny samy Malagasy heno amin’ireo onjampeo ireo, hoy izy. Toy ny filazana fa atao fitaovana politika fotsiny ny olona avy any amin’ny Faritra fa avy eo tsy rarahin’ny Mpitondra akory. Teo anatrehan’izany, noho ny tsy maintsy hitandrovana ny filaminam-bahoaka dia tsy maintsy natsahatra ny fampitana ny MBS tany amin’ny Faritra. Fandranitana adim-poko no ataon’ny mpanohitra, hoy izy, izay fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana.
Nohamafisin’ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo fa mbola fanohitohinana filaminam-bahoaka ihany koa ny filazana fa efa misotro ronono ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria ka tsy tokony handray baiko aminy intsony ireo zandary, sy ny hoe efa tsy misy mpitandro filaminana intsony eto Madagasikara. Fiantsoana fikomian’ny miaramila izany, hoy izy, izay raran’ny fehezan-dalàna famaizana, ny Lalàmpanorenana, ary ny lalàna mifehy ny serasera amin’ny Haino Vaky Jery,
Tsy nampahafantarina ny MBS
Notsindriany fa tsy mila nampahafantarina ny MBS ny raharaha satria tsy ny MBS no olan’ny Fanjakana, fa izy mandeha amin’ny zanabolana ka miparitaka henon’ny toerana rehetra. “Ny any amin’ny Faritra dia mety ho mora handairan’ny fandranitana, tsy tahaka ny eto afovoan-tany. Na ny gazety aza misy fahatarany vao tonga any amin’ny Faritra”, hoy ny fanazavany. Nilaza ny tenany fa tokony ho ireo onjampeo ireo mihitsy no efa nandraisana fepetra raha izay lainga sy tsaho ary fandranitana amin’ny endriny maro be izay no sokajiana. Saingy mandefitra ny Fanjakana amin’ilay fahalalahana miteny. “… tsy maintsy handray fepetra ihany ny Fanjakana raha ohatra ka manohy manitsakitsaka ny lalàna izy ireo”, hoy ny fanazavanay.
Nandika ny fifanarahana ny MBS
Araka ny fantatra dia nitory ireo mpandraharaha telo ireo ny MBS noho ny fahatapahan’ny fampitana mankany amin’ny Faritra. “Nazava ny tenin’ireo, nisy ny didim-pitsarana milaza fa mandika lalàna ny MBS. Ka ny ao anatin’ny taratasy fifanarahana dia nazava tsara fa mampita ny sary sy ny feo ny Canal Plus, ny startimes, ary ny Parabole, fa kosa, tsy maintsy manaja ny lalàna manan-kery ilay haino aman-jery manao fifanarahana”, hoy ny fanampim-panazavana. Izany hoe, ilay MBS ihany no nanitsakitsaka ny fifanarahana nataon’izy ireo.
LALANA LF 2020-006 MOMBA NY SERASERA: Miantoka ny fiarovana ny mpanao gazety amin’ny asany
BAOLINA KITRA: Tafaverina eo amin’ny toeran’ny Filohan’ny CAF i Ahmad
HIDITRA AMIN’NY FIHIBOHANA SA TSIA ?: Ho sarotra ny fandraisana fanapahan-kevitra anio
Fisorohana ny lozam-pifamoivoizana : Mila hentitra ny mpitandro filaminana amin’ny fisavana ny antontan-taratasy